Hagaajinta Waxqabadka Magento iyo Natiijooyinkaaga Ganacsi | Martech Zone
Khamiista, Febraayo 5, 2015 Jimco, Febraayo 6, 2015 Tony Barbagallo
Magento waa la aqoonsan yahay maaddaama ay tahay madal ganacsi oo e-commerce ah, oo awood u leh saddex-meelood meel dhammaan boggaga internetka ee tafaariiqda. Saldhigeeda isticmaalaha badan iyo shabakada horumariyaha waxay abuurayaan nidaam deegaanka ah, iyada oo aan lahayn khibrad farsamo oo aad u badan, ku dhowaad qof kastaa wuu heli karaa goob e-commerce ah oo si dhakhso leh u socota.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira hoos u dhac: Magento wuxuu noqon karaa mid culus oo gaabis ah haddii aan si habboon loo hagaajin. Tani waxay u noqon kartaa dhab ka noqosho macaamiisha maanta xawaaraha ku socda ee filaya waqtiyada jawaabta degdegga ah ee degellada ay booqdaan. Xaqiiqdii, sida laga soo xigtay a sahan dhowaan ka dhacay Clustrix, Boqolkiiba 50 shakhsiyaadka ayaa wax ka iibsan lahaa meelo kale haddii degelku si tartiib tartiib ah bogag u rarayo.
Baahida sii kordheysa ee xawaaraha degelku waxay u gudubtay hagaajinta waxqabadka Magento meesha ugu sareysa liiska inta badan xirfadleyda horumarineed. Aynu eegno seddex siyaabood oo shirkaduhu u horumarin karaan waxqabadka barnaamijkooda Magento.
In la hirgeliyo Shabakad Siin Karta (CDN)
Shabakadaha Bixinta Macluumaadka kuu oggolaaneysa inaad ka dejiso sawirrada boggaaga iyo waxyaabaha kale ee ma guurtada ah xarumaha xogta u dhow macaamiishaada. Yaraynta masaafada safarka micnaheedu waa waxyaabaha si dhaqso leh ku gaari doona halkaas. Isla mar ahaantaana, adoo ka-buuxinaya mawduucaaga keydka xogta shabakaddaada, waxaad kheyraad bilaash ah u oggolaaneysaa xitaa isticmaaleyaal isku mid ah, oo leh xitaa waqtiyo jawaab-celin wanaagsan ah. Macluumaadkaaga keydka macluumaadka wuxuu u shaqeeyaa sida ugu fiican uguna hufan markay ku sii nagaan karto abuurista, cusbooneysiinta, xaqiijinta iyo dhameystirka macaamilada. Marti gelinta akhrinta kaliya ee keydka macluumaadkaaga waxay abuureysaa culeys lama huraan ah iyo ciriiri gelinta goobaha ganacsiga e-ganacsiga ee badan.
Si habboon u hagaaji server-kaaga keydka xogta
Magento wuxuu su'aalo isku mid ah u sameeyaa server-ka keydka keydka mar kasta oo bog la daawado, in kasta oo aan wax badan laga beddelin su'aalahan waqti ka dib. Xogta waa in lagala soo baxaa diskiga ama warbaahinta keydinta, la kala soocaa lana farsameeyaa, ka dibna lagu celiyaa macmiilka. Natiijada: qashin waxqabadka. MySQL waxay bixisaa halbeeg isku dhejisan oo la yiraahdo query_cache_size kaas oo u sheegaya serverka MySQL inuu keydiyo natiijada su'aasha xasuusta, taas oo aad uga dhakhso badan helitaanka diskka.
Yaraynta codsiyada, hirgelinta CDN iyo qaabeynta keydka xogta MySQL, waa in la wanaajiyaa waxqabadka Magento; hase yeeshe weli waxaa jira ganacsiyo badan oo ay sameyn karaan si ay u hagaajiyaan waxqabadka goobta guud ahaan. Si taas loo sameeyo maamulayaasha goobta e-commerce waxay u baahan yihiin inay dib u qiimeeyaan dib-u-soo celinta xogta MySQL gabi ahaanba. Waa kuwan tusaale markii miisaanka MySQL uu ku dhaco derbiga:
(Re) Qiimee Macluumaadkaaga
Qaar badan oo ka mid ah goobaha elektaroonigga ah e-commerce ayaa marka hore adeegsada xogta MySQL. Waa xog-ururin waqti la tijaabiyey oo loogu talagalay bogagga yaryar. Halkaas ayay ku jirtaa arrinta. Macluumaadka MySQL waxay leeyihiin xadkooda. Macluumaadyo badan oo MySQL ah ayaan la socon karin baahida sii kordheysa ee boggaga internetka e-commerce ee sida xowliga ah u koraya, in kasta oo la wanaajiyay waxqabadka Magento. In kasta oo goobaha adeegsanaya MySQL ay si fudud uga miisaami karaan eber illaa 200,000 oo isticmaale, way ku margami karaan markay miisaanka ka saaraan 200,000 ilaa 300,000 oo isticmaale maxaa yeelay si fudud uma kordhin karaan culeyska. Dhammaanteenna waan ognahay, haddii degel uusan taageeri karin ganacsiga sababo la xiriira xog-ururin khaldan, qaybta hoose ee ganacsigu way dhibtoon doontaa.
Tixgeli xal cusub - Nasiib wanaag, waxaa jira xal: Macluumaadka NewSQL waxay ilaaliyaan fikradaha isku xirnaanta ee SQL laakiin waxay ku daraan waxqabadka, qiyaasta iyo helitaanka qaybaha ka maqan MySQL. Macluumaadka NewSQL waxay u oggolaanayaan ganacsiyada inay ku guuleystaan ​​waxqabadka ay u baahan yihiin barnaamijyadooda muhiimka ah, sida Magento, iyadoo la adeegsanayo xalal saaxiibtinimo u leh horumariyeyaasha horeyba ugu xirnaa SQL.
Ka faa'iideyso habka miisaanka - NewSQL waa xog-ururin isku xiran oo ku faaneysa shaqeynta miisaanka jiifka ah, hubinta macaamil ganacsi ee ACID iyo awooda lagu socodsiinayo macaamilo badan oo waxqabad leh waxqabadka ugu wanaagsan. Shaqeynta noocan oo kale ah waxay xaqiijineysaa in khibradda macaamiisha ee wax iibsiga aysan dhib lahayn iyadoo la yareynayo ama laga takhalusayo dib u dhac kasta oo dijitaal ah oo ay ku sii adkaan karaan Dhanka kale, go'aan qaadayaasha waxay falanqeyn karaan xogta si ay ugu fahmaan siyaabaha si gaar ah loogu bartilmaameedsado dukaameystayaasha fursadaha iskutallaabta iyo iibinta.
Meelaha e-commerce ee aan la diyaarin si fudud uma shaqeyn doonaan si sax ah haddii aysan u qalabaysnayn inay xamulaan culeysyada culus, gaar ahaan xilliyada taraafikada kororta. Adiga oo ka faa'iideysanaya miisaanka culus, xogta SQL ee dulqaadka leh, waxaad xaqiijin kartaa in boggaaga e-commerce uu xamili karo qadar kasta oo taraafik ah xaalad kasta, iyo sidoo kale inuu macaamiisha siiyo khibrad ganacsi oo aan xaddidneyn.
Kaalaynta xog-ururin SQL ah ayaa sidoo kale wanaajisa waxqabadka Magento. Faa'iidada weyn ee keydka xogta 'SQL' ee wax lagu qiyaaso ayaa ah inay si toos ah u kobcin karto akhrinta, qorista, cusbooneysiinta iyo falanqaynta maadaama dhibco iyo aalado badan oo xog ah lagu daro. Marka naqshadaha miisaanka ballaadhan uu la kulmo daruuraha, codsiyada cusub ayaa si fudud u dhuuqaya ku darista macaamiisha cusub iyo kordhinta mugga macaamil ganacsi.
Iyo sida ugu fiican, in keydka macluumaadka ee NewSQL uu si daah furnaan ah ugu baahin karo weydiimaha dhammaan server-yada keydka badan, isla markaana si otomaatig ah u buuxin-karo isu-dheellitirka culeyska shaqada ee goobtaada. Waa kan tusaalaha xogta NewSQL, ClustrixDB. Waxay ku socotaa lix node noodar, waxay u qaybineysaa qorista iyo akhrinta dhammaan lixda noodhadh, iyada oo si dhow loola socdo isticmaalka nidaamka kheyraadka iyo waqtiyada fulinta weydiinta:
Hubso khibrad macmiil oo habboon
Haddii aad tahay milkiile ganacsi, waa inaad sameysaa dhammaan wixii awoodaada ah si aad u xaqiijiso khibrad ganacsi oo e-commerce ah oo loogu talagalay macaamiishaada, iyadoon loo eegin inta taraafikada ee bartaada ay wax ka qabaneyso waqti kasta. Si kastaba ha noqotee, markay tahay xulashooyinka wax iibsiga ee internetka, maanta macaamiisha waxay leeyihiin ikhtiyaarro aan dhammaad lahayn - hal khibrad oo xun ayaa kaxeyn kara.
Ku saabsan Clustrix
Tags: ciriirimagentowaxqabadka magentoMySQLnewsqlwaxqabadka
Tony waa CMO ee Clustrix, oo ah xog ururin heer sare ah oo loo yaqaan 'SQL database' oo loogu talagalay daruurta iyo keydkii ugu horreeyay ee si gaar ah loo dhisay si loo daboolo dakhliga, waxqabadka iyo helitaanka dalabaadka maanta ee goobaha ganacsiga.
Sababta iyo Cawaaqib xumada ka dhalata Arrimaha Xogta